မတော်လိုက်ရတဲ့ယောက္ခမ – Grab Love Story
မောင်တုတ်အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်တုန်းကပေါ့။ကျောင်းကကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ရည်းစားဖြစ်တယ်။ဒါလဲသိပ်အဆန်းကြီးတော့မဟုတ်လှပါဘူး။လူငယ်သဘာဝချစ်ကြ၊ကြိုက်ကြ၊ဟော်တယ်ခေါ်ဆွဲလိုက်ကြဆိုတော့မထူးတော့မထူးဆန်းပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ကြိုက်ပြီး(၃)လလောက်နေတော့သူမအိမ်ကိုမောင်တုတ်ဝင်ခွင့် ထွက်ခွင့်လက်မှတ်ရသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီကောင်မလေးနာမည်ထက်ထက်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့။ထက်ထက်တို့အိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့မောင်တုတ်တစ်ယောက်ချောင်းပေါက်မတက်သွားတော့တာပေါ့။မနက်ပိုင်းဆို ကျောင်းသွားဖို့ဝင်ခေါ်တယ်။ညနေဆိုပြန်ပို့တယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုကျူရှင်အကြောင်းပြပြီးဟော်တယ်ဒိုး တယ်ပေါ့။မောင်တုတ်မိဘတွေကလဲ သူတို့သားလေးသွားလာရေးအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ကားအစုတ်တစ် စီးဝယ်ပေးထားတော့ မြင်းကိုအတောင်ပံတပ်ထားသလိုစိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားဖြစ်တယ်ပေါ့။ ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
ထက်ထက်အိမ်ကိုဝင်ထွက်ခွင့်ရတာနဲ့မနက်တိုင်းကျောင်းသွားဖို့ကြိုပေးရတာ ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ထက်ထက်တစ်ယောက်အိပ်ယာထနောက်ကျနေတဲ့နေ့ဆိုရင်မောင်တုတ်တစ်ယောက် အိမ်ထဲမှာထိုင်စောင့်ပေရော့ပဲ။ယောက္ခမကြီးကတော့စကားကိုတစ်ခွန်းစနှစ်ခွန်းစလာပြော၊ပြီးတော့ကော်ဖီဖျော် ပေး၊ပြီးသူမလဲရေမိုးချိုးဖို့ပြင်ရတာပဲဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မောင်တုတ်ယောက္ခမကြီးဟာ နာမည်ကြီးမြို့လယ်က ဟော်တယ်တစ်ခုမှာရာထူးအကြီးကြီးမန်နေဂျာမကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့ဗျာ။ထက်ထက်တို့ကအဖေဆုံးသွားပြီဆိုတော့ အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခုပေါ့။(အင်းလေ..တစ်ခုစီပဲပါမှာပေါ့။အပိုတော့ဘယ်ပါမလဲဗျ…နော့)။ ပြန်ဆက်မယ်ဗျာ….း) ထက်ထက်တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းကြာနေတဲ့နေ့မျိုးဆိုရင်တော့သူ့အမေကပဲအရင်အလုပ် ကိုထွက်သွားတာဗျ။ကျနော်နဲ့ထက်ထက်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့တာပေါ့။
ဒီလိုနေ့မျိုးဆိုရင်တော့ မောင်တုတ်တစ် ယောက်ကျောင်းမှန်မှန်တက်စာမခက် ခက်ချင်လဲခက်ဒို့မတက်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းမတက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ယောက္ခမအ လုပ်ကိုထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်တံခါးတွေပိတ်လိုက်နော်..သားဆိုတဲ့အသံကြားတာနဲ့ စစ်တပ်ကစစ်သားတွေ အော်သလိုမျိုး ဟုတ် ….ဆိုတဲ့ဝမ်းခေါင်းသံကြီးနဲ့အော်ပြီးတော့ တံခါးပိတ်ပြီးထက်ထက်ဆီကိုပြေးတော့တာပေါ့။ တစ်ရက်တော့ဒီလိုမျိုးနေ့တစ်နေ့မှာလူမိသွားခဲ့တယ်။ယောက္ခမကြီးကဟမ်းဖုန်းကျန်ခဲ့လို့လာယူတာနဲ့ကြုံရော။ သူ့ဆီမှာလဲသော့တစ်စုံရှိတယ်လေ။တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ မောင်တုတ်ကလဲကားကိုအဝေးကြီးမှာရပ်ခဲ့ရတဲ့နေ့ပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက်များသိသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဖိနပ်လေးကိုလဲခါးကြားထိုးပြီးချစ်သူအခန်းထဲမှာသိမ်းထား ရတာကတော့ ထက်ထက်ရဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကိုလိုက်နာတယ်ပဲဆိုရမှာပေါ့။ယောက္ခမကြီးက ကျွန်တော်တို့သွား ပြီဆိုပြီးသူ့သော့နဲ့သူဖွင်ပြီးဝင်တဲ့အချိန်ပေါ့။ဒီနေရာမှာထက်ထက်တို့ အိမ်ရဲ့လိုကေးရှင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောပါရစေ ထက်ထက်တို့က တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးဗျ။အိပ်ခန်း(၃)ခန်းရှိတယ်။၂ခန်းကကပ်လျှက်ပေါ့။ပြီးတော့တစ်ခန်းက မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ။ယောက္ခမကြီးတို့လင်မယား(သူ့ယောင်္ကျားရှိစဉ်အခါက)နေတဲ့အခန်းမှာထက်ထက်အမေ နေတယ်။ဘေးကပ်ရက်အခန်းမှာကထက်ထက်အခန်း၊မျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းကတော့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့။ပြီးမှ နောက်ဖေးမှာမီးဖိုနဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲလျှက်။အဲ..ဘယ်ရောက်သွားပြန်လဲမသိဘူး..ပြန်ဆက်မယ်။ယောက္ခမ ကြီးကဖုန်းကျန်ခဲ့လို့ပြန်ဝင်လာတဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ကလဲဖြစ်ချင်တော့ရေချိုးခန်းထဲကရေချိုးပြီးပြန်လာတဲ့ ထက်ထက်ကိုထမိန်ရေလျားနဲ့မြင်တော့ စိတ်မထိမ်းနိုင်ပဲ ဆွဲပြီးကျုံးတဲ့အချိန်။အခန်းတံခါးကိုဟခဲ့မိတယ်ဗျာ။
အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီးကိုလုံခြုံအောင်ပိတ်ခဲ့တော့ မောင်တုတ်တစ်ယောက်ခပ်ပေါ့ပေါ့ပဲထားလိုက်တာပေါ့လေ။ ချစ်သူလေးထက်ထက်က ရေလျားလေးနဲ့လှုပ်လီလှုပ်လဲ့လမ်းလျှောက်လာပြီးလျှာလေးထုတ်ပြလိုက်တော့ စိတ်တွေသောင်းကျန်းလွန်းလို့အ၀တ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပြီး ထက်ထက်အခန်းထဲမှာကောက်ပြီးကော့နေ တဲ့ဖင်လေးကိုကုတင်စောင်းမှာတင်ပြီး လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပြီး ဖင်သားဖွေးဖွေးကောက်ကောက်လေးတွေကို လက်နဲ့အားရပါးရညှစ်ပြီးဆောင့်ပေးနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ထက်ထက်ကလဲထန်တဲ့မိန်းကလေးအမျီုးအစားထဲမှာပါ တယ်လေ။နဲနဲဆွတာနဲ့အရည်တွေကများများထွက်၊လီးဝင်တာနဲ့စိတ်ကိုလွှတ်ပြီးအော်တက်တော့မောင်တုတ် အကြိုက်တွေ့ပေါ့။ဒီလိုမျိုးချစ်သူလေးကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီးဆောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ…တစ်ဘက်ခန်းက တံခါးဖွင့်သံလဲကြားရောနှစ်ယောက်သားဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ရော။မောင်တုတ်ရောထက်ထက်ရောဖင်တုံးလုံး လေးတွေနဲ့တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်ပြီးပြီုင်တူကြည့်မိတာက အခန်းတံခါးကို။အခန်းတံခါးကလဲ ဟစိလေးဖြစ်နေ။မောင်တုတ်ဆိုပိုဆိုးသေး ဂွေးတန်းလန်းနဲ့ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းကိုမသိတာ…။ထက်ထက် ကတော့ ကမန်းကတန်းထမိန်ကိုကောက်ပြီးရေလျားပြီး ဟန်မပျက်နေဆိုတဲ့အမူအယာနဲ့အကျီ င်္တွေဝတ်ခိုင်ပြီး ဖောရှောသွားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။မောင်တုတ်လဲတုန်တုန်ရီရီနဲ့ အကျီ င်္နဲ့ပုဆိုးကိုကောက်ဝတ် ပြီးထက်ထက်တို့ဘာများပြောနေလိမ့်မလဲဆိုပြီးအခန်းတံခါးအကွယ်လေးမှာနားပါးပါးနဲ့ကပ်ပြီးနားထောင်နေမိ တယ်။သူတို့သားအမိနှစ်ယောက်ပြောတာကြားတော့ ခုနကကြောက်စိတ်နဲ့တောင်တာလျော့သွားတဲ့လီးတောင် ပြန်တောင်လာမိပါတော့တယ်။
သူတို့ဘာတွေပြောနေကြသလဲဆိုတော့…. မိထက်…ငါကညည်းကိုကျောင်းသွားပြီတောင်ထင်နေတာ..နင်ကဟော်တယ်ခသက်သာအောင်လုပ်နေတာ လား…
ဘယ်နှချီပြီှးမှကျောင်းသွားမှာတုန်း…ဟိုတစ်ခေါက်တုန်းကလို သမီးဟာပြဲသွားလားမသိဘူးဆိုရင်ငါRoll onဘူး နဲ့ထပ်ထိုးပေးလိုက်အုန်းမှာ..ကောင်မလေးနော်..အမေထက်သမီးတစ်လကြီးချင်နေ..ဟုတ်လား..
ဟိ..အမေနော်..အမေ့Roll onဗူးဆိုရင်တော့ ကွိုင်လေးဘာလေးစွပ်ပြီးမှထိုး…ဟိဟိ..
သွက်လက်တက်ကြွစွာပဲထက်ထက် ကသူ့အမေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ အားဝါးပေးလိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ သူမအမေက..
ဟွန်း.ရွံစရာ..ရေခဲချောင်းစားထားတာကြီးနဲ့ လို့နောက်သွားပါသေးတယ်။ဒီစကားတွေကြားပြီးမောင်တုတ်တစ် ယောက်သွေးဆူမိတာအမှန်။ဖြစ်နိုင်ရင် ရုံးတက်ဖို့သွားတဲ့ယောက္ခမကြီးကိုလိင်စိတ်နဲ့ပထမဆုံးကြည့်လိုက်မိတာ သူမ၀တ်ထားတဲ့ အဖြူရောင်ရှပ်အကျီ်နဲ့ဒူးဖုံးစကဒ်အနက်ရောင်လေးနဲ့ပင်တီအရာကြီးကထင်းလို့။ချက်ချင်းပဲ မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးအတွေးထဲကဖျောက်နေတုန်းထက်ထက်တစ်ယောက်အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်လာပြီးထမိန် ရေလျားလေးကိုချွတ်ပြီးအလိုက်တသိဘာမှပြောစရာမလိုပဲကုတင်စောင်းမှာလေးဘက်လေးပြန်ထောက်ပြီး…
မောင်တုတ်နဲ့ထက်ထက်တို့တစ်ချီပြီးသွားပါတယ်။ကုတင်စောင်းမှာလေးဘက်ကုန်းထားတဲ့ထက်ထက် ကိုမောင်တုတ်ဆောင့်ဆောင့်ပြီးလိုးတာ ဖင်ကိုသာမကိုင်ပေးထားဘူးဆိုရင်ထက်ထက်တစ်ယောက်အရှေ့ကို ဟပ်ထိုးလဲပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကြမ်းတာလဲလို့ တစ်ချီပြီးသွားတဲ့အခါမှာထက်ထက်ကမေးတော့ ထက်အမေနဲ့ ထက်ကိုပြိုင်တူလိုးချင်းစိတ်ပြင်းထန်နေလို့ပါလို့ပြောလိုက်ရင် ဓါးနဲ့ထိုးမှာဆိုးလို့ ထက်ကအရမ်းလှလို့ပါလို့ပြော လိုက်ပါတယ်။ထက်ထက်လဲပြုံးသွားပြီး..
ကျွန်တော်လဲ ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ပဲ ရှုးရှုးပေါက်ပြီး လိင်တံကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ထွက်လာမိပါတယ်။တစ်ခါမှသတိမ ထားမိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်အပူတပြင်းရှာဖွေနေမိပါတယ်။ထက်ထက်တို့အိမ်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်ကာလ အတွင်းမှာပထမဆုံးဆိုတာတော့ဝန်ခံပါရစေ။ကျွန်တော်ရှာနေမိတာ ထက်ထက်တို့အိမ်နောက်ဖေးမှာလှမ်းထား တဲ့ ထက်ထက်အမေ၀တ်တဲ့အတွင်းခံတွေကိုပါ။ဘာရယ်လို့တေ့ာမဟုတ်ပါဘူး။ကြည့်ချင်စိတ်တွေပြင်းထန်နေပါ တယ်။တွေ့ပါပြီ..။ကြိုးတန်းမှာလှမ်းထားတဲ့ အနီရောင်ပင်တီတစ်ထည်ရယ်၊ ပန်းဆီရောင်တစ်ထည်ရယ်။ဘယ် သူ့ဟာ ဘာရောင်ဆိုတာကျနော်ခွဲခြားတက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ချစ်သူထက်ထက်ရဲ့ဆိုဒ်ကို ကျနော်သိနေပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါ။ကျွန်တော် မောင်တုတ်ရဲ့လက်တွေဟာ မစေခိုင်းရပါပဲ အနီရောင်အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဇာနားကွပ်လေးတွေနဲ့ အနီရောင်ပင်တီလေးရဲ့ဘယ်နေရာဟာဘာကို ဖုံးအုပ်နေလိမ့်မလဲလို့ရင်ဖိုစွာကြည့်ရင်းနဲ့ ကျနော့်ရဲ့လီးနဲ့ ပင်တီလေးရဲ့အဓိကနေရာတို့ထိတွေ့ပေးလိုက်တာနဲ့ လိင်တံကြီးကပြန်မာလာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာထက်ထက်ကိုလိုးပြီးထွက်ထားတဲ့လိင်ရည်တွေရယ်၊ထက်ထက်ဆီ ကထွက်ထားတဲ့အရည်တွေရယ်လီးမှာပေနေတုန်းပါ။ဒါတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမစဉ်းစားမိခဲ့ပါဘူး။ဒီအတိုင်းပဲ လီးကိုပင်တီနဲ့အုပ်ပြီဆုတ်ကိုင်လို့ကောင်းကောင်းဆုတ်ကိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာလာမှ သတိပြန်ဝင်ပြီး ရှူးပေါက်၊ရေဆေးပြီးတာနဲ့ပင်တီလေးကိုသူ့နေရာသူပြန်လှမ်းခဲ့ပြီးထက်ထက်ဘေးမှာဝင်အိပ်လိုက်ပါတယ်။ ထက်ထက်နိုးလာတော့ ခုနက အမေဘာတွေပြောသွားလဲဆိုပြီးမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီးကြောက်နေသလိုစိုးရွံ့ နေသလိုလိုဟန်လုပ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်(သူငယ်ချင်းတို့ရေ..မောင်တုတ်ကအဲ့လိုမျိုးလဲသောက်ခွက်ပြောင် တိုက်တက်ပါတယ်။)
ဘာမှမဖြစ်ဘူးကို…အမေနဲ့ထက်နဲ့ကအရမ်းပွင့်လင်းတာ…။အမေကဘာမှမပြောဘူး..မစိုးရိမ်နဲ့..ဟိုတစ် ခေါက်တုန်းက ကို လုပ်တုန်းကထက်ထက် အဖုတ်လေးပွန်းသွားလို့နာတာတောင်မှအမေ့ကိုပြောပြလိုက် တယ်။အမေနဲ့ကအဲ့ဒီလောက်ပွင့်လင်းတာ..ဘယ်လောက်ပွင့်လင်းလဲဆိုရင်..အမ်စီကားတွေလောက်ကို အတူတူထိုင်ကြည့်ကြတယ်။။အရမ်းကြမ်းတဲ့ကားတွေကိုသာ တစ်ယောက်စီခွဲကြည့်ကြတာ။ဒါတွေကိုတစ် ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိနေပေမဲ့မပြောဘူး….မေမေဆီမှာ ဖေဖေထားခဲ့တဲ့အခွေတွေအများကြီး။ဖေဖေက သင်္ဘောသားဆိုတော့ အခွေတွေဝယ်လာတာ..ထက်လဲကြည့်ချင်ယူကြည့်လိုက်တာပဲ..မေမေကသိတယ် ။ဘာမှမပြောဘူး…။အဲ့ဒါ ၁၀တန်းအောင်ကတည်းကလေ။
အဲ့လိုလဲမဟုတ်ဘူး..အသက်အရွယ်နဲ့ခေတ်အခြေအနေကိုနားလည်တယ်.ထက်ဘက်ကလဲကျောင်းစာကို ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာ..လုပ်ချင်တာလုပ်စာမေးပွဲမကျရင်ပြီးရော..မူးယစ်ဆေးမသုံးရင်ပြီးရော ကျန်တာကတော့ခွင့်လွှတ်တယ်…တစ်ခါတစ်လေဆိုရယ်ရတယ်သိလား….မေမေကိုဖုန်းနဲ့ကြူနေတဲ့ဘဲကြီး တွေကို ထက်က ဟောက်လွှတ်တာ….ဟိ..
အမလေ..ကိုရေ…ပြောမနေနဲ့ အမေကိုလိုက်နေတဲ့ ဘဲကြီးတွေ၊ဘဲလေးတွေတစ်ပုံကြိး၊ထက်တို့အသက်အရွယ် ကောင်လေးတွေတောင်ပါသေး…။မေမေက ထက်အိမ်ထောင်ကျမှ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ပြောတာပဲ..အင်းလေ…. ထက်နားလည်ပေးရမှာပေါ့။ သူလဲသွေးသားနဲ့ပဲလေ..အသက်(၃၀)ကတည်းကမုဆိုးမဖြစ်တာ….အခုဆိုသူ(၄၁) နှစ်ရှိနေပြီ..မိန်းကလေးချင်းဆိုတော့ ထက်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ထက်နဲ့ကို နဲ့ဒီလိုမျိုးချစ်ကြရင်မေမေ့ကိုအား နာမိတယ်..သိလား..ကို…
အော်..သူလဲသွေးသားနဲ့ပဲလေ…ထက်ကို ငဲ့ပြီးတော့ နောက်အိမ်ထောင်မပြုပဲနေတာ ဒါကိုထက်က သူ့ကိုမငဲ့ပဲ ..ကိုနဲ့..
ဒါဆိုလဲ ထက်ရယ်…မေမေ့ကို ဝေပေးလိုက်ပေါ့(တမင်သွေးတိုးစမ်းပြီးမေးကြည့်တာ)
ဘာကိုဝေပေးရမှာလဲ..ဟင့်အင်း..ကိုရယ်..အဲ့လိုကြီးတော့မကောင်းပါဘူး…မေမေကလိုချင်လွန်းလို့တောင်းဆိုလာရင်တော့လဲ ပေးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ မေမေနဲ့ဖြစ်ပြီးရင်တော့ ကိုနဲ့ထက်လမ်းခွဲမှာ…
အင်း..သိပါတယ်။။ထက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ…မေမေတောင်းဆိုလာသည့်တိုင်အောင်ထက်မငြင်းပါဘူး ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလူကိုလေ ထက်ဘယ်လောက်ထိချစ်နေပါစေ လုံးဝလုံးဝလက်မထပ်ဘူးသိလား..
ဘာတွေသက်ပြင်းချနေတာလဲ..သိတယ်နော်..ဟွန်း..ဆရာမကပါကင်ဖွင့်လိုက်လို့ကျလာတာဆိုတော့ အသက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ မစ်ဖ်လိုဖ်ခရစ်ဆစ် ဖြစ်နေတာလား.ဟွန်း..သူများအမေကို….ကိုနော်..
ဟွန်း…ဒါကြီးက ကဲကိုကဲတယ်….လို့ဆိုပြီးထက်ထက်တစ်ယောက် စောင်အောက်ထဲကိုခေါင်းတိုးဝင်သွားပါ တယ်။သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်နော့်လိင်တံကြီးဟာ ပူနွေးတဲ့အာငွေ့ရဲ့ထိတွေ့မှုကိုခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်တနေ့…ထက်ထက်မှာထားတဲ့ ဒီဗီဒီခွေတွေကို အိမ်ကိုသွားပို့ဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထက်က နောက်ဆုံးထွက်ထား တဲ့စပါတာဂတ်အခွေတွေကြည့်ချင်တယ်လို့ဆိုလာတာနဲ့ချစ်သူရဲ့စိတ်အလိုတော်ကျအတိုင်း မောင်တုတ်တစ် ယောက် ခိုးကူးရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာဝယ်ပြီးသွားပေးပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ ထက်ထက်က သူမအဖွားအ်ိမ်ကိုသွား နေတယ်ခင်ဗျ။ယောက္ခမကြီးတစ်ယောက်ထဲအိမ်မှာ။သူလဲရုံးကပြန်လာခါစနဲ့တူပါတယ်ဗျာ။ရုံးယူနီဖောင်းမချွတ် ရသေးပဲအိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတယ်ခင်ဗျ။ကျနော်ဝင်လာတာလဲမြင်ရော ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပြီး
ဟဲ့ကောင်လေး…ထက်ထက်မရှိဘူးလေ..ဘာလာလုပ်တာလဲ ….လို့မေးပါတယ်။ကျနော်လဲထက်ထက်ကအခွေ တွေလာပေးခိုင်းလို့လာပေးတာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ယောက္ခမကြီးက
ကျနော်ယောက္ခမကြီးကိုအခွေတွေလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ပါးစပ်ကယောင်ပြီးအန်တီမှာထားတဲ့အခွေတွေလို့ ထွက်သွားတာကိုပြန်ဘရိတ်အုပ်ချိန်မရတော့ပါဘူး.။သူမှာထားတာက စပါတာကပ်အခွေတွေလေဗျာ…
ကျနော်လှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခွေတွေထည့်ထားတဲ့အမည်းရောင်ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အထုတ်ကိုလှမ်းယူပြီးအခွေ တွေကိုထုတ်ပြီးယောက္ခမကြီးကကြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့သူမရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အကျယ် ချဲ့ပြီးတွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြုံးဟာ အကြံအစည်တစ်ခုခုရသွားတဲ့အပြုံးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ.
ပြောပြေဆိုဆိုနဲ့ကျနော့်ရှေ့ကနေဖြတ်သွားပြီးနောက်ဖေးခန်းထဲဝင်သွားတဲ့ယောက္ခမကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းအလှဟာ အနက်ရောင်စကဒ်အောက်က အတွင်းခံဘောင်းဘီရာကြီးနဲ့လုံးဝန်းစွင့်ကားနေပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်တိုင်း တစ်လုံးချင်းစီတုန်ခါသွားတဲ့တင်ပါးကြီးတွေဟာတကယ့်ဂန္တ၀င်(သရုပ်ဆောင်မဟုတ်)အလှဆိုရင်ငြင်းမဲ့လူမရှိ ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်ဖေးဝင်သွားတာ (၃)မိနစ်လောက်ပဲကြာမယ်ထင်ပါတယ်။ကော်ဖီခွက်နှစ်ခွက်ကို ကိုင်ရင်းပြန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။
သူမလဲ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာထိုင်ရင်းကော်ဖီသောက်နေပါတယ်။သိပ်မကြာပါဘူး။ကျွန်တော်ဝယ်လာတဲ့အခွေတွေ ထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုယူပြီးတော့ အခွေတွေထဲကတစ်ခွေကိုရွေးပြီး ဆိုဖာပေါ်ကနေအောက်ကိုဒူးထောက်ထိုင် ချလိုက်ပြီးအရှေ့မှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီစက်ထဲကိုဖင်ကြီးကုန်ပြီးအခွေထည့်ပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ ဗျာ။ဖင်လုံးကြီးတွေလှလွန်းတဲ့အန်တီကြီးတစ်ယောက်ဒူးဖုံးစကဒ်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖင်ကုန်ပြနေတာများဗျာ။ လုံးဝန်းပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီအရာကြီးကိုထင်းနေတာပဲ။ကိုင်ပြီးဆောင့်လိုက်ရရင်အနှစ်ပဲလို့တွေးနေချိန်မှာပဲ
လာပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တီဗီမှမဖွင့်ရသေးတာ။တီဗီမှာကျနော်သူ့ကိုကြည့်နေတာကိုသူမပြန်မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့စပါတာ ကပ်တယ်ဆိုပါတော့။ရောမလူထွားကြီးတွေချလိုက်ကြ၊နှက်လိုက်ကြ၊အီတာလျှံသူလေးတွေကလဲ ရေဆေးငါးတွေလိုဖြူဖြူဝင်းဝင်းကြီးတွေနဲ့နို့တွေဖော်ပြီးသရုပ်ဆောင်..ဒီလိုနဲ့ကောင်းခန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ယောက္ခမကြီးတော့ဘယ်လိုနေတယ်မသိဘူး..ကျွန်တော်ကတော့ညီတော်မောင်ခေါင်းထောင်လာပြီး သကာလ နှာမှုတ်အသက်ရှုသံတွေပြင်းလာပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်သူမကိုကြည့်လိုက်တော့လဲမျက်လုံး တွေကမျက်မှန်အမဲကျွဲကိုင်းအောက်မှာအရည်တွေလဲ့ပြိးကြည့်နေတာ..ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အကြည့်တွေဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာ မင်းသားကိုမင်းသမီးကတီဗီထဲမှာ ပလွေကိုင်ပေးနေပါပြီ။
နှစ်ယောက်သားမျက်နှာချင်းဆိုင်မိချိန်မှာတော့သူမကစပြိးပြုံးပြလို့ကျနော်လဲအူကြောင်ကြောင်လီးတောင်လျှက်ပဲပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယောက္ခမကြီးကမပြောမဆိုနဲ့ အခွေထည့်တုန်းကအနေအထားအ တိုင်းဒူးတုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီးအခွေရွေးနေသယောင်နဲ့ဖင်ကြီးထပ်ကုန်းပြပါတယ်။ကျွန်တော့်စိတ်တွေမုန်ယိုနေပါ ပြီ။အကယ်လို့အတွင်းဆွဲပြီးလိုးလိုက်ရင်လဲ ပြသနာမရှိနိုင်ဘူးလို့တွေးမိပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော့် ဟာသူမသမီးရဲ့ချစ်သူလေ…။ဒါပေမဲ့စိတ်ကမရဲပေမဲ့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်က်မထိတထိသူမဖင်သားကြိးတွေ ကိုခြေမနဲ့သွားထိကြည့်ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့အထိအတွေ့ဗျာ။ဒါတောင်ခြေမနဲ့တို့သလိုပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီလို မျိုး(၃)ခါလောက်မတော်တဆလိုလိုဘာလိုလိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ..
ဟဲ့ကောင်လေး..လူကြီးကိုခြေထောက်ကြိးနဲ့ငရဲကြီးမှာမကြောက်ဘူးလားဆိုပြိး ပြုံးရင်းပြန်ပြောတဲ့အသံကိုကြား တော့…
ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ကိုမောင်တုတ်ဟာဒီလောက်တော့မတုံးမအသေးပါဘူး။စွေ့ခနဲဆိုယောက္ခမကြီးရဲ့ဘေးကိုငုတ်တုတ်ကြီးရောက်သွားပြီးသူမခါးကနေပြီဖက်လိုက်ပါတယ်။ပြီတဲ့နောက်မှာတော့တင်ပလင်ခွေထိုင်ပြိးသူမကိုယ်လုံးကိုရင်ဘတ်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ပါတယ်။ယောက္ခမကြိးကမျက်လုံးမှိတ်ထားပေမဲ့ပြုံးယောင်သမ်းနေတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုငုံစုပ်လိုက်ချိန်မှာနှုတ်ခမ်းနီတွေဆိုးထားလို့မွေးတေးတေးဖြစ်နေပေမဲ့သူမရဲ့အနမ်းကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ပြန်လည်တုန့်ပြန်မှုကြောင့် ကျွန်တော်လက်တွေဟာမရိုးမရွဖြစ်လာပြီးသူမကိုသိုင်းဖက်ထားရာကနေသူမရဲ့စကဒ်ပေါ်က ဖင်သားတွေကိုကိုင်တွယ်နေရင်းအတွင်းခံအရာကြီးကိုလက်နဲ့ဆတ်ခနဲဆွဲလိုက်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်လုပ်နေတဲ့အခါမှာတော့ဖတ်ခနဲဖတ်ခနဲအသံတွေတောင်မြည်လာပါတယ်။ယောက္ခမကြီးပွဲစကြမ်းပါပြီ။သူမရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်လိင်တံကိုပုဆိုးအပေါ်ကနေလာကိုင်တဲ့အတွက်လိင်တံကြီးဟာအင်မတန်မာကျောလှနေပြီပေါ့။ဒီလိုနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခပ်ကြမ်းကြမ်းနမ်းရင်းဘယ်လိုဘယ်လိုယောက္ခမကြိးရဲ့အကျီ င်္ကြယ်သီးတွေဖြုတ်မိ တယ်မသိပါဘူး။ကျနော်သတိထားမိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လဲအပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနေပြိး..ယောက္ခမကြီးရဲ့ရုံး ၀တ်စုံ(ရှပ်အဖြူနဲ့စကဒ်အမဲ)အကျီင်္ င်္ကျယ်သီးတွေဟာတစ်လုံးမကျန်ပွင့်ထွက်နေပါပြီ။
အရမ်းမကြီးပေမဲ့အောက်ကိုအနည်းငယ်တွဲနေသယောင်ရှိတဲ့သူမနို့အုံဖြူဖြူကြီးတွေကိုစည်းနှောင်ထားတာက ဘရာဇီယာခရမ်းရောင်လေးပါ။မောင်တုတ်လက်တွေကလဲ ဘရာဇီယာပေါ်ကနေပြိးသူမနို့တွေကိုအုပ်မိုးပြီးကိုင် ထားရာကနေပြီး ယောက္ခမကြီးက..
အခန်းထဲသွားကြမယ်လေ… မောင်တုတ်တို့လဲတီဗီကိုပိတ်ပြီးယောက္ခမကြိးအခန်းထဲကိုယောက္ခမကြိးတင်ပါးတွေကိုလက်တစ်ဖက်ကဆုတ် ကိုင်ရင်းဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်။အခန်းတံခါးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲမောင်တုတ်ကပုဆိုးကိုချွတ်ချလိုက်ပြီး သူမကတော့ သူမအကျိ်ကိုချွတ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စကဒ်ကိုဘေးဇစ်ကိုဖြုတ်လိုက်ချိန်မှာ တော့မောင်တုတ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူမတင်ပါးကြီးတွေကအရာထင်းထင်းကြီးတွေဟာအနီရောင်ကိုကိုယ်စားပြုတယ် လို့သိလိုက်ရပါတယ်။စွင့်ကားတဲ့တင်ပါးကြီးတွေကိုဇာနားကွပ်တွေပါတဲ့အတွင်းခံအနီရောင်ကိုချွတ်မယ်လုပ်တဲ့အခါမှတော့..မောင်တုတ်က..
ယောက်ခမနဲ့ကျွန်တော်..မနဲ့မောင်ဖြစ်သွားကြတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်တုတ်ကအတွင်းခံအမဲရောင်လေးနဲ့သူမကတော့ဘရာဇီယာခရမ်းရောင်လေးရယ်အတွင်းခံအနီရောင်လေးရယ်နဲ့ ကျနော်တို့နှစ်ယောက်ခုတင်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ထပ်လျှက်လှဲချလိုက်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းမောင်တုတ်ကအပေါ်ကသူမက အောက်ကပေါ့။မောင်တုတ်တစ်ယောက်သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုလိုက်နမ်းနေရင်းနှုတ်ခမ်းချင်းစုတ်လိုက် နားရွက်လေးတွေကိုကိုက်လိုက်လုပ်လိုက်လုပ်ပေးနေပါတယ်။မောင်တုတ်လက်တွေကတော့သူမရဲ့ဘရာဇီယာ ကိုအတွင်းထဲလက်နှိုက်ပြီးတော့သူမနို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုပွတ်ချေပေးနေတာပါ။.နို့သီးခေါင်းလေးတွေဟာမာကျောလာတယ်ဆိုတာကိုမောင်တုတ်ရဲ့အထိအတွေ့ကြောင့်သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှတော့မျက်နှာကိုနမ်းတာရပ်ပြိး ဘရာဇီယာကိုမချွတ်ပဲနို့တွေကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြိးသူမနို့သီးခေါင်းအညိုရောင်မာကျောကျောလေးတွေကိုလျာနဲ့ ယက်လိုက်၊စို့လိုက်လုပ်ပေးချိန်မှာတော့
သူမထံကညည်းသံလေးတွေခပ်ကျယ်ကျယ်ထွက်လာပါတယ်။မောင်တုတ်လဲလက်တွေကိုအနားမနေပဲသူမရဲ့ စောက်ဖုတ်နေရာကိုမှန်ပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘိအနီရောင်ပေါ်ကနေပြီးစမ်းလိုက်တဲ့အခါမှတော့အတွင်းခံဂွကြားနေရာမှာစိုစွတ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မောင်တုတ်တစ်ယောက်နို့တွေစို့တာရပ်ပြီးအဆီအနည်းငယ်စုနေလို့ဆူနေစပြု နေတဲ့ဝမ်းဗိုက်သာဖြူဖြူတွေကိုလျှာလေးနဲ့မထိတထိကလိရင်းအောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြိးသူမရဲ့ပင်တီနေရာရောက်တော့ပင်တီကိုမချွတ်ပေးပဲစောက်ဖုတ်ရှိနေတဲ့နေရာကိုဆွဲလှန်လိုက်ပြိးတော့သူမစောက်ဖုတ်ကိုစတင်လေ့လာပါတော့တယ်။အမွေးကြမ်းကြမ်းတွေပေါက်နေတဲ့ဆီးခုံမွှေးတွေအောက်ကနီအာနေတဲစောက်ဖုတ်မှာချွဲနေတဲ့စောက်ရည်တွေနဲ့အပြည့်ပေါ့။ဒီကြားထဲမှာစောက်ဖုတ်ကိုဖြဲလိုက်ရင်ပေါ်လာတဲ့အစိနီနီလေးတွေကိုလျှာနဲ့တို့လိုက်ချိန်မှတော့မောင်တုတ်တစ်ယောက်ငံကျိကျိအရသာကိုခံစားရပြီးသူမကတော့အိပ်ယာခင်းစကို လက်နှစ်ဖက်ကားပြိးဖမ်းဆုတ်လိုက်ပါတယ်။
မောင်တုတ်တစ်ယောက်နေရာပြောင်းလိုက်ပါတယ်။သူမလဲကုတင်ပေါ်ကထပြိးအတွင်းခံကိုချွတ်ပြီးမောင်တုတ် ဘက်ကိုကျောပေးပြီးတက်ခွပါတယ်။မောင်တုတ်အတွင်းခံကိုသူမကပါးစပ်နဲ့ညှပ်ပြီးချွတ်ပေးချိ်န်မှာတော့ဒုံးပျံ့တစင်းအလားထောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးကိုစတင်ပြီးစုပ်ပါတော့တယ်။ယောက္ခမကြိးရဲ့လိးစုပ်ပညာကတော့အံမခန်း ပါ။ထက်ထက်တစ်ယောက်လဲအမေတူလေးမို့ထင်ပါတယ်အစုပ်အမှုတ်အရမ်းကောင်းပါတယ်။ယောက္ခမကြီးဆီ ကထူးခြားတာကတော့ 69ပုံစံနဲ့စုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖင်ကြိးကိုယမ်းပြီးတော့စောက်ဖုတ်နဲ့ကျနော့်မျက်နှာကိုပွတ် တာပါပဲ။(၁၅)မိနစ်လောက်စုပ်ပြီးမှုတ်ပြိးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမကပဲ ဦးဆောင်ပြီးပုံစံပြောင်းပါတယ်။ပြောင်း တဲ့ပုံစံကတော့သူမကအပေါ်ကပါ။ပက်လက်လှန်ပြီးလီးတောင်ထားတဲ့မောင်တုတ်လီးရှေ့တည့်တည့်ကိုတစ် ချက်ထဲကိုထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့အရှေ့အနောက်ဖိပွတ်လိုက်၊ဆောင့်လိုက်၊စကောဝိုင်းမွှေလိုက်နဲ့ယောက္ခမက စိတ်ကြိုက်လိုးနေပါတယ်။ကောင်းလွန်းလို့မောင်တုတ်တစ်ယောက်ပြီးသွားမှာဆိုးလို့မနည်းကိုထိမ်းနေရပါတယ်။ သူမဆောင့်ချက်တွေကြောင့်မောင်တုတ်တစ်ယောက်ဖီလင်တွေငယ်ထိပ်ရောက်ပြီးမျက်လုံးတွေတောင်မှေးစင်း နေရပါတယ်။သူမနောက်တစ်ခေါက်ပြိးသွားဟန်တူပါတယ်။အင်မတန်ကြမ်းတဲ့ဆောင့်ချက်တွေကနေအရှိန်သေ သွားပြီးမောင်တုတ်အပေါ်ကိုမှောက်ကျလာပါတယ်။မောင်တုတ်လဲ နို့တွေကိုလက်နဲ့ညှစ်ပေးပြီးသူမကိုဖမ်းထိမ်း ထားပြီးဒူးကိုထောင်ကာ လေးငါးဆယ်ချက်လောက်ဆောင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာယောက္ခမကြီးအသံတောင်မထွက် နိုင်တော့ပဲအသက်ရှုသံပြင်းပြင်းတွေသာကြားနေရပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဇကတော့မသေးတဲ့ယောက္ခမကြိးက
မောင်..စိတ်ကြိုက်လုပ်နော်လို့ပြောရင်း…မောင်တုတ်ပေါ်ကတက်ခွနေရာကနေဆင်းလိုက်ပါတယ်။မောင်တုတ် ပေါင်တွေ၊ဥတွေမှာယောက္ခမကြိးဆီကထွက်တဲ့အရည်တွေရွှဲလို့နေပါတယ်။သူမကဘယ်လိုနေပေးရမလဲဆိုတဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တော့မောင်တုတ်ကိုယ်တိုင်ပဲလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပြင်ယူလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်အိုးကောင်းတဲ့စော် ကြီးကိုကုန်းခိုင်းပြီးမလုပ်၇င်မောင်တုတ်တစ်ယောက် ခွေးဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာ။သူမကိုကုတင်စောင်းမှာပဲလက်ထောက် ပြီးခါးကိုခွက်ကာကုန်းခိုင်းပါတယ်။အလိုက်သိလွန်းတဲ့ယောက္ခမကြီးကခေါင်းအုံးကိုရင်ဘတ်ထဲမှာပိုက်ပြီးကုန်း နေတာမို့ခါးကခွက်နေပြီးဖင်ပူးတောင်းထောင်နေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။မောင်တုတ်တစ်ယောက်အားမနာနိုင်ပဲ ယောက္ခမကြီးရဲ့စွင့်ကားတဲ့တင်ပါးကြိးတွေကိုလက်နှစ်ဘက်နဲ့စုံကိုင်ညှစ်ပေးပြီးအားပါးတရဆောင့်ပေးနေပါ တယ်။(၁၀)မိနစ်လောက်ကြာတော့မောင်တုတ်ပြီးချင်လာတာနဲ့ ယောက္ခမကြိးကိုပက်လက်ပြန်လှန်လိုက်ပြီး လှေထိုးကြီးပုံစံနဲ့တစ်မျိုးတစ်တီတူးခြေထောင်ပုံစံနဲ့တဖုံဆော်ပေးနေရင်းမောင်တုတ်တစ်ယောက်ပြီးချင်လာပါ တယ်။ဒါကြောင့်
မောင်တုတ်တစ်ယောက်လိုးနေရင်းနဲ့ယောက္ခမကြီးချွတ်ထားတဲ့မျက်မှန်ကိုပြန်တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွဲကိုင်း မျက်မှန်အမဲရောင်နဲ့ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတဲ့မောင်တုတ်ယောက္ခမကြိးကိုနုိ့တွေကိုဖြစ်ညှစ်ရင်းနို့သီးခေါင်းတွေကိုဆွဲရင်းလိုးကာလိင်တံတစ်လျှောက်မှာကျင်ခနဲဖြစ်သွားလို့ လီးကိုကပြာကယာဆွဲနှုတ်လိုက်ပြီးယောက်ခမရဲ့ ရင်ဘတ်ပေါ်ကိုခွလိုက်ကာ သူမမျက်နှာပေါ်ကိုလိင်ရည်ဖြူဖြူတွေပန်းချလိုက်ပါတယ်။လိင်ရည်တွေဟာသူမ မျက်မှန်ထိစင်ကုန်တာကြောင့်အောကားထဲကအတိုင်းကိုဖြစ်သွားပါတယ်။
အဲ့ဒီနေ့ကသူမကို မောင်တုတ်(၃)ချီဆွဲပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထက်ထက်လစ်ရင်လစ်သလိုခိုးစား နေခဲ့တာ ထက်ထက်နဲ့ပြသနာမတက်ခင်အထိပေါ့။ဒါပေမဲ့ယောက္ခမကြိးကလိုအပ်ချိန်တိုင်းမှာနေပေးအုန်း မယ်ဆိုတာ ယနေ့အထိပြောနေတုန်းပါပဲ။